अन्तिम यू-१९ क्रिकेट खेल्ने पाँच खेलाडी - Khelpati
अन्तिम यू-१९ क्रिकेट खेल्ने पाँच खेलाडी
शनिवार, भदौ ७, २०७६ विश्वास थापा
यू १९ राष्ट्रिय टिमका खेलाडी, बाँयाबाट क्रमस हरी बहादुर चौहान, पवन सर्राफ र आशिफ शेख
काठमाडौं । श्रीलंकामा आयोजना हुने एसीसी यू-१९ एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली यूवा टोलीको घोषणा भईसकेको छ ।
नेपालले बिहिबार रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा १५ सदस्सीय टोलीको घोषणा गरेको हो । र, नेपाली टोली शनिबार श्रीलंका समेत प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
एसिया कप भदौ १९ देखि २८ गतेसम्म हुनेछ । र , नेपालले आयोजक श्रीलंकासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ ।
समूह 'बी' मा रहेको नेपालले श्रीलंकासँग भदौ २० गते खेल्नेछ । यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले भदौ २२ गते बंगलादेश र अन्तिम खेलमा भदौ २४ गते युएईसँग खेल्नेछ ।
समूह 'ए' मा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र कुवेत रहेका छन् । समूहको दुई शीर्ष टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन् ।
नेपालले घोषणा गरेको १५ सदस्सीय टोलीमा रहेका केहि खेलाडीको भने यो अन्तिम यू-१९ प्रतियोगिता हुनेछ । उमेरको हिसाबमा नेपालका ५ खेलाडीले अन्तिम पटक यू-१९ क्रिकेट खेल्दैछन् ।
नेपालका लागि अन्तिम पटक यू-१९ क्रिकेट खेल्ने पाँच खेलाडीको नालीबेली तल उल्लेख गरिएको छ ।
१. पवन सर्राफ
नेपाली राष्ट्रिय यू-१९ टोलीका ओपनर हुन्, पवन सर्राफ । नेपालका लागि उमेर समूहमा ओपनिङ गर्ने पवन घरेलु तथा सिनियर टोलीमा मध्य क्रममा ब्याटिङ गर्ने गर्छन् ।
गत महिना मलेसियामा सम्पन्न एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा नेपालका लागि ओपनिङ गरेका पवनले ४९ दशमलव ३३ को औसतमा १४८ रन बनाएका थिए । प्रतियोगितामा पवन सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीको तेस्रो तथा नेपालको लागि पहिलो स्थानमा रहेका थिए ।
त्यसअघि आईसीसी यू-१९ विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा २७ दशमलव २० को औसतमा १३६ रन बनाएका थिए । उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने सूचीको छैठौं स्थानमा रहे । नेपली ब्याट्सम्यान मध्य पवन सर्वाधिक रन बनाउने तेस्रो खेलाडी बने । उनी भन्दा अघि रहेका रोहित कुमार पौडेलले १९४ रन र रित गौतमले १५६ रन बनाएका थिए ।
अलराउण्डर प्रदर्शन गर्ने पवनले सिनियर टिमबाट यसै वर्ष डेब्यु गरेका थिए । युएईविरुद्ध डेब्यु गरेका उनले फिनिसरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
तर, यस पटकको यू-१९ एसिया कप पवनको अन्तिम यू-१९ प्रतियोगिता हुनेछ । पवनको उमेर अहिले १८ वर्ष २४९ दिनको रहेको छ । यू-१९ टिममा १९ वर्ष पुगेका खेलाडीले खेल्न नपाउने हुँदा पवनको यो अन्तिम यू-१९ खेल हुनेछ ।
दाँया हाते मध्यम गतिका बलर राशिद घरेलु प्रतियोगितामा अलराउण्डर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनले चाहिएको बेला ब्याटिङमा समेत आफुलाई प्रमाणित गरेका केहि उदाहरण छन् ।
एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा नेपालका लागि ३ इनिङसमा २ विकेट हात पारेका राशिदले ८० दशमलब ५३ प्रतिशत डट बल फालेका थिए । प्रतियोगितामा उनको इकोनमि मात्र २ दशमलब १२ को रहेको थियो ।
यस्तै आईसीसी यू-१९ विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा ४ खेलमा ३ विकेट हात पारेका उनले ३ दशमलव २५ को इकोनमि रहेको थियो ।
राशिदले एभरेस्ट प्रिमिएर लिग (ईपीएल) मा ललितपुर पेट्रिएट्स, धनगडी प्रिमिएर लिग (डिपीएल) मा काठमाडौं गोल्डेन्स र पोखरा प्रिमिएर लिग (पीपीएल) मा पोखरा पल्टनसबाट खेल्दै आएका छन् ।
तर, १८ वर्ष १८४ दिन पुगेका राशिदको यो अन्तिम उमेर समूहको प्रतियोगिता हुनेछ । यू-१९ एसिया कपमा उनले अन्तिम पटक उमेर समूहको जर्सी लगाउने देखिएको छ ।
३. हरि बहादुर चौहान
नेपालको राईजिङ खेलाडीको सूचीमा पर्ने खेलाडी हुन्, हरि । दोस्रो संस्करणको पीएम कपमा कीर्तिमानी प्रदर्शन गरेपछि उनले पछाडी फर्केर हेर्न परेको छैन । प्रदेश ४ बाट खेलेका उनले प्रदेश १ विरुद्दको खेलमा शतकसहित ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए । जुन घरेलु प्रतियोगिताको दुर्लभ रेकर्ड हो ।
हरिले तेस्रो संस्करणको पीएम कपमा त्रिभुवन आर्मीबाट खेल्दै प्रतियोगिता भर १ सय ५४ रन बनाएका थिए । उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सातौं स्थानमा रहेका थिए । र.आर्मीबाट सर्वाधिक रन बनाउने चौथो खेलाडी बनेका थिए ।
सन् २०१९ को आईसीसी यू-१९ विश्वकप छनोट अन्तर्गत युएईविरुद्दको खेलमा डेब्यु गर्दै उनले अविजित ७४ बलमा ६७ रन बनाएका थिए ।
हरिले छोटो समयमा राम्रो खेलाडीको परिचय दिएका छन् । उनी भविष्यमा नेपालका लागि मध्य क्रमको ब्याटिङ सम्हाल्ने क्षमता राख्दछन् ।
तर, हरिको लागि यू-१९ एसिया कप अन्तिम उमेर समूहको प्रतियोगिता हुनेछ । किनकि हरि अहिले १८ वर्ष २०३ दिनका भईसकेका छन् ।
४. मोहमद आसिफ शेख
कुनै समय यू-१९ टिममा नियमित सदस्य रहेका कप्तान आसिफ शेख खराब लयका कारण केहि वर्ष टिम बाहिर रहेका थिए । तर, श्रीलंकामा हुने यू-१९ एसिया कपका लागि टोलीमा पर्दै आसिफले यू-१९ टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् ।
तर, यू-१९ एसिया कप आसिफको लागि अन्तिम यू-१९ प्रतियोगिता हुनेछ । किनकि १८ वर्ष ६३ दिन पुगेका आसिफले उमेरको कारण अर्को यू-१९ प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् ।
आसिफले पहिलो संस्करणको ईपीएलमा फाइनल खेलमा शतक प्रहार गर्दै सनसनी फैलाएका थिए । पन्चकन्या तेजबाट ओपनिङ गरेका उनले ६४ बलको सामना गर्दै ८ छक्का र ७ चौकाको मद्दतमा अविजित १ सय ११ बनाएका थिए ।
शतकीय इनिङ्स खेल्दै उनले पहिलो संस्करणको उपाधि आफ्नो टिमलाई जिताउन सफल भएका थिए भने ईपीएलमा शतक प्रहार गर्ने आसिफ पहिलो खेलाडी हुन् ।
५. कमल सिंह ऐरी
दाँया हाते मध्यम गतिका बलर कमल यू-१९ टिममा नियमित सदस्य हुन् ।
गत महिना मलेसियामा सम्पन्न एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा नेपालका लागि ३ इनिङसमा ५ विकेट हात पारेका कमलले ८४ दशमलब २६ प्रतिशत डट बल फालेका थिए । प्रतियोगितामा उनको इकोनमि मात्र २ दशमलब ५६ को रहेको थियो ।
यस्तै आईसीसी यू-१९ विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा ४ खेलमा ४ विकेट हात पारेका उनले ३ दशमलब ३३ को इकोनमि रहेको थियो ।
कमलले एभरेस्ट प्रिमिएर लिग (ईपीएल) मा चितवन टाइगर्स, धनगडी प्रिमिएर लिग (डिपीएल) मा सिवाईसी अत्तरिया र पोखरा प्रिमिएर लिग (पीपीएल) मा एक्सपर्ट धनगढी ब्लुजबाट खेल्दै आएका छन् ।
तर, १८ वर्ष २४७ दिन पुगेका कमलको लागि समेत यो प्रतियोगिता अन्तिम उमेर समूहको प्रतियोगिता हुनेछ ।
अन्य खेलाडीको उमेर :
रोहित कुमार पौडेल : १६ वर्ष १४८ दिन
रित गौतम : १७ वर्ष ३४१ दिन
सन्दीप जोरा : १७ वर्ष १०५ दिन
भिम सार्की : १७ वर्ष ३३२ दिन
कुशल मल्ल : १५ वर्ष १६४ दिन
सागर ढकाल : १७ वर्ष १० दिन
प्रतिष जिसी : १५ वर्ष १५२ दिन
खडक बोहरा : १७ वर्ष ४४ दिन
लोकेश बम : १६ वर्ष ७० दिन
सुर्य तामाङ : १७ वर्ष ३२८ दिन
नोट : सबै खेलाडीको उमेर समाचार प्रकाशित हुँदाको मितिमा गणना गरिएको हो ।